Semalt: Nahoana no mibaribary ny SEO eo amin'ny Internet?
SEO manampy amin'ny fanatsarana ny lalao sy ny fifamoivoizana amin'ny tranokala.Ny ankamaroan'ny fampahalalana momba ny fampianarana momba ny SEO izay hitanao ao amin'ny aterineto dia avy amin'ireo mpamokatra ambony indrindra sy manam-pahaizana manokana momba ny solika.Ao amin'ny tsenan'ny fifaninanana amin'izao fotoana izao dia zava-dehibe ho an'ny mpitarika raharaham-barotra ny miantehitra kokoa amin'ny fitaovana toy izany ary mahatakatra ny maha-zava-dehibe nySEO zava-dehibe ho an'ny fandrosoana amin'ny ho avy.
Igor Gamanenko, mpitantana ny Success Successor Semalt ,dia manazava ny antony mahatonga ny fanabeazana momba ny SEO hita ao amin'ny Internet dia mitarika amin'ny fanapahan-kevitra tsy mety amin'ny tetikasan'ny SEO - virtual server hosting cheapest.
Tsy ilaintsika ny tsy miraharaha ny dikan'ny toro-hevitra SEOtanteraka. Mifanohitra amin'izany, ny olona dia tokony handroso amim-pitandremana,ny fampiasana ireto soso-kevitra ireto:
1. Hamarino ny fampahalalana alohan'ny fampiharana. Ny angona omen'ny sahaNy mpitory ahy dia tsy mitovy amin'ny zavatra hitranga aminao.
2. Fantaro izay tena dikan'io fampahalalana io ho an'ny orinasanao aryNahoana no zava-dehibe ny misoroka ny fanarahana torohevitra tsy misy dikany.
3. Andramo fomba vaovao izay toa mampidi-doza noho ny fisalasalana tafiditra.Na izany aza, ny tombontsoa dia mety hanan-danja kokoa noho ny fisainan'ny fanandramana fanandramana.
Ny fahasamihafan'ny tranga
SEO dia tsy manerana izao tontolo izao, ary tsy mitovy amin'ny sehatra maro toy ny algorithm,ny sehatry ny fifaninanana, ary ny fari-pandraharahana manokana ara-barotra. Ohatra, mifanohitra ny algorithms eo an-toerana sy ny fanjakana..Olona iray mikarokaNy lahatsoratra momba ny SEO eo an-toerana dia hahita ny toro-hevitra avy amin'ny SEO ao amin'ny SEO. Ny orinasa dia afaka mampiasa paikady fifaninanana tsy miankina amin'ny fanapahan-kevinyireo modely ara-barotra. Noho izany, ireo singa mahomby dia tsy mitovy. Ny orinasa iray dia mety hahomby amin'ny alalan'ny fampiasana teny fanalahidy nefa tsy mahombyiray hafa raha mampiasa fomba fitovitovy amin'izany izy ireo. Farany, ny fahasarotan'ny fanatsarana dia mahatonga ny fahasarotana tsy hitazona ny anton'ny vokatra azo.Ny antony voalaza etsy ambony dia mametraka ny fomba fijery mifantoka amin'ny tranga mifantoka amin'ny trangan-javatra azo itokisana kokoa amin'ny fahombiazan'ny SEO. Izany no mahatonga antsika
Niely ny fampahalalam-baovao
Ny olana lehibe iray misy ifandraisany amin'ny SEO amin'izao fotoana izao dia ny fiparitahan'ny vaovao tsy marina.Ny fahadisoan'ny tsy fanekena dia ny fahadisoan'ilay mpitory irery ihany, fa ny orinasa mihitsy. Ny fahavitsian'ny sehatra dia manome ny angonafahafahana, izay zavatra manan-danja ho an'ny mpanentana. Noho izany dia mila mahazo sy manome vaovao ho an'ny mpanjifa ny matihaninaalohan'ny fanamafisana. Mora ny mamolavola ny fahatsapana avy amin'ny zava-nitranga iray fa tsy avy amin'ny firoboroboana kokoa ho an'ny mpamaky. Miaraka amin'nyNy fitomboan'ny isan'ireo optimisiera dia avo lenta ny fahafahana mampiely vaovao diso. Ny fanendrikendrehana momba ny fiheverana dia avy amin'ny fanambarana tenaireo manam-pahaizana izay manana tanjona tokana ihany no manao tombony. Ny ankamaroan'ireo bits vaovao ireo dia avy amin'ny bilaogy sy forum forum ambany.
Ny maha-tokana ny raharaha
Asehon'ny fanadihadiana siantifika fa mora kokoa ny mianatra amin'ny alalan'ny fanaovanatsy toy ny fampianarana nentim-paharazana. Ny famakiana sy famelana ny fampahalalam-baovao dia tsy mampivelatra ny fahatsapana mahatsikaiky azymiasa. Amin'ny alàlan'ny fanatontosana amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny tranokalam-pifandraisana amin'ny tenanao manokana, dia lasa azo atao ny manakorontana ny olana amin'ny fomba mahavariana ary miakatravahaolana izay na dia ny mpitarika indostria aza tsy nieritreritra aloha. Ny tsy firaharahana torohevitra, na ny fanadihadiana azy, dia hitarika amin'ny fanavaozana hafalalana. Ny torohevitra nomena dia tokony ho azo ampiasaina fotsiny rehefa mianatra momba ny orinasa na rehefa mamorona hevitra vaovao. Manolora tetik'ady tsara indrindradia mitaky fialan-tsoam-pahaizana momba ny zavatra nianaran-dry zareo sy nikaroka fikarohana momba ny an'ny orinasanao.